कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख २५ गते बुधबारको राशिफल ! - PUBLICAAWAJ
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज वैशाख २५ गते बुधबारको राशिफल !
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख २४, २०७६१७:३१ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
वि.सं. २०७६ साल वैशाख २५ गते। बुधबार। इश्वी सन् २०१९ मे ८ तारिख। शकसंवत् १९४१। परिधावी संवत्सर। उत्तरायण। वसन्त ऋतु। नेपाल संवत् ११३९ बछलाथ्व। वैशाख शुक्लपक्ष। तिथि– चतुर्थी, २५:२३ बजेउप्रान्त पञ्चमी। नक्षत्र– मृगशिरा, १६:४० बजेउप्रान्त आर्द्रा। योग– सुकर्मा, २२:०६ बजेउप्रान्त धृति। करण– वणिज, १४:०४ बजेदेखि भद्रा, २५:२३ बजेउप्रान्त वव। आनन्दादिमा अमृत योग। चन्द्रराशि– मिथुन। काठमाडौंमा सूर्योदय– ५:२२ बजे, सूर्यास्त– १८:४१ बजे र दिनमान ३३ घडी १७ पला। ललितपुरमा रातो मत्स्येन्द्रनाथ रथयात्रारम्भ। विश्व रेडक्रस दिवस।
आज तपाइँको दिन शुभ फलदायी रहनेछ । विचारमा अति शिघ्र परिवर्तन आउँदा महत्वपूर्ण कार्यमा अन्तिम निर्णय लिन कठिन हुनेछ । कार्यको सन्दर्भ या कुनै विशिष्ट कारण यात्राको योग छ । लेखन कार्यको लागी राम्रो दिन छ । वौद्धिक एवम् तार्किक विचार विनिमय हान सक्दछ । कुनै महिलाको साथ विवाद नगर्नु होला ।
मनमा स्थिरता कायम राख्नु होला । अनिर्णयको मनोदशाको फल स्वरुप हात आएको अवसर गुमाउन सक्नु हुनेछ । समझौताको बानी बसाल्दा संघर्ष गर्नु पर्ने छैन । प्रवासको आयोजनालाई स्थगित गरिदिनु होला । लेखक, कलाकार एवम् सल्लाहकारको लागी निकै अनुकुल दिन रहेको छ । आज कुनै पनि नयाँ कार्यको प्रारम्भ नगर्नु होला ।
माता लक्ष्मीको कृपाले आजको दिन आर्थिक दृष्टिकोणले निकै लाभदायक रहनेछ । उत्तम स्वादिष्ट भोजन, सुन्दर वस्त्रालंकार, मित्र एवम् परिवारजनको स्काथ आजको दिन मानसिक दृष्टिले निकै आनन्ददाई रहनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । धनको अधिक खर्च नहोस् यसको ध्यान राख्नु होला । उपहार पाउँदा मन आनन्दित रहनेछ । निषेधात्मक विचारलाई मनमा आउन नदिनु होला ।
आज कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय नलिनु होला । सम्बन्धीजनको साथ मनमुटावको प्रसङ्ग हुन सक्दछ । पारिवारिक कार्यमा व्यय हुन सक्दछ । वाणीमा संयम राख्नु होला । स्वास्थ्यको ध्यान राख्नु होला । मानहानि एवम् धनहानीबाट बच्नु होला ।
आजको दिन निकै लाभदायक छ । मित्र र स्त्रीबाट लाभ हुने सम्भावना छ । सुन्दर स्थलमा पर्यटनको सम्भावना छ । अनिर्णायक्ताको कारण हात आएको अवसर जना सक्दछ । महत्वपूर्ण निर्णयलाई स्थगित गर्नु होला । अधिकतर समय विचारमा व्यस्त रहनु हुनेछ । व्यापार एवम् आर्थिक लाभको योग छ ।
आजको दिन शुभ फलदायी रहनेछ । नयाँ कार्यको आयोजन सम्पन्न हुनेछ । व्यापारीवर्ग एवम् नोकरी पेशा गर्नेहरुको लागी निकै राम्रो समय छ । व्यापारमा लाभ एवम् नोकरीमा पदोन्नतिको योग छ । पिताबाट लाभ हुने सम्भावना छ । परिवारमा आनन्दको वातावरण बन्नेछ ।
व्यावसायिक क्षेत्रमा लाभको सम्भावना छ । नोकरी र व्यापारमा सहकर्मीको पूर्ण सहयोग मिल्ने छैन । लामो यात्रा या कुनै धार्मिक स्थलमा जाने अवसर मिल्न सक्छ । लेखनकार्य एवम् वौद्धिक क्षेत्रमा सक्रिय रहनु हुनेछ । शारीरिक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ ।
आजको दिन शान्तीपूर्वक र सावधानीपूर्वक बिताउनु होला । नयाँ कार्यमा असफलता प्राप्त हुने योग छ त्यसैले आज कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी नगर्नु होला । क्रोधमा संयम राख्नु होला । सरकार विरोधी प्रवृत्ति बाट टाढा रहनु होला । खर्च बढ्दा आर्थिक संकट हुन सक्दछ ।
आजको दिन आनन्दपूर्वक बित्नेछ । मनोरंजनको प्रसङ्गले मन प्रफुल्लित रहनेछ । विपरीत लिंगीय व्यक्तिको सहवासले आनन्द महशुस हुनेछ । मित्रको साथ प्रवास पर्यटनको आयोजना हुन सक्दछ । लेखनकार्यको लागी अनुकुल दिन रहेको छ । साझेदारीबाट लाभ हुनेछ ।
व्यापारमा विकाशको लागी आजको दिन लाभकारी रहनेछ । व्यावसायमा आफ्नो आयोजन अनुसार कार्य शुरु गर्न सक्नु हुनेछ । धनको लेनदेनमा सफलता मिल्नेछ । व्यापार सम्बन्धित कार्यमा वाधा आउनेछ । घरमा सुख शान्तीको वातावरण बन्नेछ । सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ ।
वाणी तथा विचारमा शिघ्र परिवर्तन आउनेछ । वौद्धिक चर्चामा जोडिनु हुनेछ । लेखनकार्य तथा सर्जनात्मक प्रवृत्तिबाट आनन्द मिल्नेछ । आकस्मिक खर्चको योग छ । पाचन नहुँदा अपचको बिमारीबाट स्वास्थ्य बिग्रन सक्दछ ।
उत्साह तथा स्फुर्तीमा कमि देखिनेछ । परिवारजनको साथ विवाद नगर्नु होला । शारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ । अप्रिय घटनाले मन खिन्न रहनेछ । नोकरीमा चिन्ता रहनेछ । धन तथा किर्तिको हानी नहोस् यसको पूर्ण ध्यान राख्नु होला ।
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज जेष्ठ २३ गते बिहिबारको राशिफल !